Semalt: Ny fomba tsara indrindra hanakanana tranonkala iray
Website Scraping is not a difficult task. Maro ireo manam-pahaizana amin'izao fotoana izao izay mahafantatra tsara ny fomba hanampiana ireo mpampiasa hanangona ireo angona rehetra ilainy amin'ny klioban'ny tsindry iray. Teknika vaovao sy mahomby izany, ary maro ireo mpikaroka amin'ny Internet no mampiasa izany mba hanangonana ireo haino aman-jery rehetra mba handresena ireo mpifaninana aminy ary hampitombo ny fahombiazan'ny orinasa. Amin'ny ankapobeny, afaka mahazo fampahalalana maromaro izy ireo, toy ny lisitry ny lahatahiry, ny vidiny, ny vokatra ary ny maro hafa.
Zava-kendren'ny tranonkala fingotra
Alohan'ny hanapahana pejy isan-karazany dia mila fantarin'ireo mpampiasa ny hevitr'izy ireo ny fanasitranana tranonkala . Midika izany fa ny teknolojia maoderina dia afaka manampy ny mpitantana hahazo ny fampahalalana rehetra ilainy amin'ny fampiasana programa ordinatera isan-karazany. Amin'izany fomba izany dia afaka mamoaka ny angona amin'ny fomba tsotra izy ireo ary tsy mandany fotoana.
Taona maro lasa izay dia voatery namoaka ny angon-drakitra rehetra avy amin'ny tranonkala ny olona. Tsy mora ny fomba satria ny tranon-tsambo dia tsy maintsy nandany ora maro na andro maromaro, mba hahazoana ny votoatiny. Saingy asa goavana ho an'ny mpikaroka sy mpandrindra ny tranonkala maro satria tsy dia nahomby.
Teknolojia vaovao sy automatique
Fanararaotra ny tranonkala dia fitaovana lehibe izay afaka manome vokatra tsara ho an'ny mpampiasa azy tsy misy fotoana. Raha ny marina, ny mpikaroka web dia afaka mahita ny data rehetra izay tadiaviny amin'ny tsindry iray monja. Afaka mamonjy fotoana sy hery izy ireo, ary aoka ho azo antoka fa haka ny tarehimarika marina tadiaviny izy ireo raha tsy misy fahadisoana. Ao anatin'ny minitra vitsy monja, afaka manamboatra pejy maromaro izy ireo ary mahazo ny vokatra ilaina.
Ny vokatra mahomby amin'ny tsindry bokotra iray
Amin'ny alalan'ny tsindry bokotra iray, ny mpampiasa dia afaka manamboatra tranokala iray vokatra tiany. Tsy mila mivoaka sy manao fikarohana ara-barotra izy ireo. Fa kosa, afaka mahita ny fampahalalana rehetra ilainy amin'ny ordinaterany izy ireo.
Ny tombotsoan'ny tranokala androany
Ny lanjan'ny fanangonana tranonkala dia tena zava-dehibe ho an'ireo olona mitantana orinasa. Afaka mamoaka sy manangona vola be ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo ary manangona azy ireo anaty rakitra. Fivarotam-piarovana goavana tsy misy fetrany izay manome fahafahana mahagaga ho an'ireo mpampiasa azy.
Lasa malaza be ny fomba fanesorana ny tranonkala indrindra ho an'ireo tompona e-shops sy ireo mpiara-miasa aminy. Azo atao tsara izany ary manome fahafahana an'ireo mpitantana sy mpiara-miasa mba handinika ny vidin'ny vokatra sy ny vokatra tsara kokoa. Ny fandinganana tranonkala dia atao amin'ny programa iray amin'ny ordinatera, izay mampiasa ny rafitra fitsaboana mba handraisana votoaty avy amin'ny tranonkala samihafa Source .